Kuhle Yongsheng ikhaya kombhede umbhede, omnyama, double umbhede Umkhiqizi futhi Factory | Tianda
Imigqa ehlelwe ngobumnene enenkinobho ehlukile yokuxhuma, amaphiko alinganiswe kahle nomugqa ophindwe kabili we-nailhead trim unikeza lo mbhede ophakanyiswe ngokuphelele ukubukeka kwesimanjemanje obukade ukulangazelele. Kepha ubuhle bangempela bendlovukazi yaseVintasso? Umklamo wayo ophakeme uza ngentengo ephansi ngokumangazayo. Ekugcineni, inketho engabizi kakhulu kulabo abanokunambitheka okubizayo.
• Kufaka phakathi i-headboard, i-footboard, ama-rails nama-slats
• Okufekethwayo kwesikhumba okumnyama
• I-button-tufted, headboard headboard enezimpawu zokunquma ze-nailhead
• Izinyawo zezinkuni eziveziwe
Imininingwane nokubuka konke
Sebenzisa umbhede wasekhaya wendlovukazi yaseYongsheng ukudala ipharadesi njengendawo yokubuyela ekamelweni lokulala ngentengo engabizi. Imigqa ehlelwe ngokucophelela, izinkinobho ezihlukile zezinkinobho, ubukhulu bephiko nenhle yomugqa ophindwe kabili wezinzipho zinika lo mbhede ohlanganiswe ngokuphelele ukubukeka okunothile nokwanamuhla obukade ukufuna. Kodwa ingabe umbhede omkhulu kaYongsheng muhle ngempela? Idizayini yayo esezingeni eliphezulu ishibhile ngokumangazayo. Ekugcineni, kuyindlela engabizi kakhulu kulabo abanokuthanda okubizayo. Umbhede womcamelo mude futhi muhle, ufudumele futhi ugcwele.
I-velvet grey king bed suit ethokomele ingeza ukubukeka kwesimanje ku-master suite yakho., Lokhu okombhede kungangezwa kalula esikhaleni sakho. Sithanda ukuthi ama-accents ekhanda le-nail afaka kanjani uzungu.
Umbhede wasekhaya waseYongsheng uletha ukunethezeka egumbini lakho lokulala. Lo mbhede omangalisayo ufaka i-faux yesikhumba ephakanyisiwe ebhodi yebhodi ene-stud trim nezinkinobho zezinkinobho. Umnyama wemfashini uzofanisa noma yisiphi isitayela segumbi ngokuphelele. Awufuni ukuphuthelwa lobu buhle besimanje!
Omatilasi nabomatilasi besisekelo / basentwasahlobo bayatholakala futhi bathengiswa ngokwehlukana.
Ngemigqa elula, imilenze evulekile eyingqayizivele nebhodi ebushelelezi ekhonjiwe, lo mbhede omkhulu wasepulatifomu unazo zonke izimpawu zesitayela sangekhulu leminyaka.
· Kufaka phakathi i-headboard, ama-pedals, izinsimbi kanye nama-slats
Ingaphakathi lesikhumba lokufakelwa elimnyama
Inkinobho ibambe iphiko lokubuyela emuva elinebhodi elincane le-pin head
Izinyawo zokhuni eziveziwe
Umbhede awudingi umbhede wesisekelo / wasentwasahlobo
· Omatilasi bayatholakala, bathengiswa ngokwehlukana
Isikhathi somhlangano esilinganiselwayo: imizuzu engama-60
134 amakhilogremu. (Ama-60.78 kgs.)
• Ububanzi: 69.50 "
Ukujula: 86.88 "
Ukuphakama: 55.50 "
Ukuphakama okuguqukayo (iminithi): 49.50 "
Ukuphakama okuguqukayo (ubuningi): 55.50 "
Umbhede ophakanyisiwe wendlovukazi Ububanzi: 69.50 "
• Umbhede ophakanyisiwe wendlovukazi ojulile: 86.88 "
Indlovukazi ephakanyisiwe ephakanyisiwe Ukuphakama: 55.50 "
• Ububanzi be-Headboard: 69.50 "
• Ukujula Kwebhodi: 4.00 "
Ukuphakama kwe-Headboard: 55.50 "
• Ububanzi be-Footboard: 63.00 "
• Ukujula kwe-Footboard: 1.75 "
• Ukuphakama kwe-Footboard: 10.88 "
• Ububanzi besitimela: 61.25 "
• Isitimela kuya phansi: 4.75 "
Imininingwane eminingi Yomkhiqizo
Isivumelwano Esiphelile Sokulanda kwe-PDF
Disemba 29, 2020 Jinan Mingchang ikhanda lokukhiqiza Co., Ltd.
2021.3.3 UJinan Tianda Textile Technology Co., Ltd
Olandelayo: Yongsheng ekhaya isiguqo umbhede